गैँडा गणना गर्न दाता खोज्दै विभाग - गैँडा गणना गर्न दाता खोज्दै विभाग
२०७५, २९ माघ, 08:38:04 AM
विभागका महानिर्देशक मनबहादुर खड्काका अनुसार गैँडा गणनाका लागि करीब रु एक करोड खर्च हुन्छ । त्यसका लागि यसअघि पनि सहयोग गरिरहेका दातृ निकायसँग सहयोगका लागि प्रस्ताव गरिएको उनले बताए । मार्च÷अप्रिलमा गैँडा गणनाको तयारी गरिएको भए पनि बजेटको निक्र्याैल भइनसकेकाले मिति तय गर्न नसकिएको खड्काले बताए ।
उनले भने “हामीसँग पैसा छैन, दाता खोजिरहेका छौँ । दाताको टुङ्गोसँगै गणनाको मिति तय हुन्छ ।” यसअघि सन् २०१५ मा गैँडा गणना गरिएको थियो । गत वर्षको वर्षात्मा बाढीले धेरै गैँडा बगाएको र कालगतिका कारण धेरै गैँडा मरेकाले यो वर्षको गणनालाई महत्वका साथ हेरिएको छ ।
आहा ! कस्तो राम्रो बर्दिया राष्ट्रिय निञ्कुज, तपाई पनि जाने कि घुम्न ?
बाघको संख्या लोभलाग्दो गरी बढेपछि पर्यटक ह्वात्तै बढे